Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0413 lak
Ny avonavona mialoha faharavana
Alakamisy 25 Apr.
Vakio ny bokin’i Obadia. Inona ireo fahamarinana lehibe, ara-pitondran-tena sy ara-panahy, azontsika raisina avy amin’io boky io?
Obadia no boky fohy indrindra ao amin’ny Testamenta Taloha. Voarakitra ao aminy ny fahitana ara-paminaniana mikasika ny fitsaran’Andriamanitra ny tanin’i Edôma. Misy olana telo ifantohan’ny hafatra ao amin’ny boky: ny avonavon’i Edôma (and. 1-4), ny fietrena hanjo azy (and. 5-9) ary ny herisetran’i Edôma tamin’ny Joda (and. 10-14).
Ny Edômita dia taranak’i Esao, rahalahin’i Jakôba. Efa hatrany amin’ny adim-pianakaviana teo amin’izy mirahalahy kambana (izay razamben’ny firenena anankiroa taty aoriana) no niantomboka ny fifankahalana teo amin’ny Isiraelita sy ny Edômita. Araka ny voalazan’ny Gen. 33 anefa dia nihavana ihany izy roa lahy ireo taty aoriana. Nandidy ny Isiraelita àry Andriamanitra hoe: “Aza mankahala ny Edômita, fa rahalahinao izy.” (Deo. 23:7, dikan-tenin’ny Baiboly katôlika).
Na teo aza anefa izany, dia mbola nitohy nandritra ny taonjato maro ihany ny fifandrafiana nisy teo amin’ireo firenena roa ireo. Rehefa nandrava an’i Jerosalema i Babilônina ka namabo ny mponina tao aminy, dia tsy hoe faly fotsiny ny Edômita fa nanararaotra namono izay Isiraelita afa-nandositra sady nanampy tamin’ny fandrobana ny fananana tao Jerosalema (Sal. 137:7). Noho io antony io no nampitandreman’i Obadia mpaminany an’i Edôma hoe hotsaraina araka izay nataony izy: “Toy ny nataonao no mba hatao aminao kosa” (Oba. 15). Tsy mba nitondra tena tahaka ny
rahalahy tamin’ny mponina tany Joda ny Edômita tamin’ny fotoana nampahory azy ireo indrindra fa vao mainka aza izy nanampy ireo fahavalo indray (Fit. 4:21,22).
Teo atsimo atsinanan’ny Ranomasina Maty no nisy ny faritry ny tanin’i Edôma. Izany dia tany feno tendrombohitra avo, vatolampy mideza, zohy ary tsefatsefaky ny haram-bato maro azon’ny tafika ierena. Ny ankamaroan’ny tanànan’ny Edômita dia niorina teny amin’ireny toerana sarotra idirana ireny. Sela (fantatra ihany koa amin’ny anarana hoe: Petra) no renivohitr’i Edôma. Nitombo tao amin’io firenena io ny fahatokian-tena feno avonavona izay hita taratra amin’ity fanontaniana ity hoe: “Iza no hampivarina ahy ho eny an-tany?” (Oba. 3).
Tsy afa-bela eo anatrehan’Andriamanitra ny olona izay manararaotra ny hafa amin’ny fotoam-pahoriana manjo azy. Nampitandrina ireo mponina tany Edôma feno fireharehana i Obadia fa hatsingerin’Andriamanitra eo an-dohany izay nataony. Tsy hisy toerana hahafana mandositra an’i Jehôvah (Amô. 9:2,3). Ny andron’Andriamanitra izay ho avy dia hitondra fitsarana sy famonjena. Hisotro ny kapoaky ny fahatezeran’Andriamanitra i Edôma ary haverina amin’ny laoniny kosa mandritra izany ny haren’ny vahoakan’Andriamanitra.